#NABShow: 2016 နေ့ NAB Show မှာလေးရက်မြောက်နေ့ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » #NABShow: 2016 NAB Show မှာနေ့လေး
#NABShow: 2016 NAB Show မှာနေ့လေး
နေ့လေးနှင့် 2016 ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက် NAB ပြရန်!!! ဒါဟာအံ့သြစရာစီးနင်းခဲ့ရဲ့ !!! သငျသညျဆာလောင်မွတ်သိပ်နေမိလျှင်, စားမှရိုင်ယန်ရဲ့ထိပ်တန်းသောနေရာများ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ဘလော့မေ့လျော့မနေပါနဲ့ ... ယနေ့ဆက်လက် #ဂတ်စ် ပြပွဲကာလအတွင်းကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်: www.broadcastbeat.com/nab-show-foodies/ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်နောက်ဆုံး -Afterward, #NABShow - ကပြရန်လေတိုက်-Down ၏အဆုံးဖွင့် - တစ် NAB အစဉ်အလာ 21pm: ပါတီယနေ့ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ6@00 ပါ! တစ်ဦးအလွတ်သဘောအဖြစ်အပျက်, အခါတိုင်းအားဖြင့်တစ်စက်။ ရောင်းချသူ, တက်ရောက်နှင့်မိတ်ဆွေများတစ်ဦးဘီယာနှင့် / သို့မဟုတ်ညစာဖမ်းပြီးသူတို့ကလေဆိပ်မှဦးရန်ရှိသည်မှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်း, unwind ။ အဆိုပါ Monte Carlo ဟိုတယ်တွင်အရက်ဆိုင်မှဦးခေါင်း။
... ရဲ့တစ်လှည့်ဖျားတဦးတည်းနောက်ဆုံးအချိန်ကိုယူပါစေ !!!
ရိုင်ယန်တိုက်ရိုက်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ရရှိသွားတဲ့ - ငါသည်ငါ့ closeup မစ္စတာ DeMille အဘို့အဆင်သင့်ပါပဲ!
အဆိုပါ #Broadcastbeat အချို့ချအချိန်ပေါ်ယောက်ျားတွေမှာထွက် nerding အသံ #lectrosonics အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Colin နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်အသစ်တွေကျော်။
ဖမ်း #NABShow မှာအွန်လိုင်း LIVE nabshow.com or broadcastbeat.com အခုပဲ!!!
NAB ပြရန် LIVE!
ဘရုစ်ရစ်ချတ်ဆန်, ဗီဒီယို Link ကို၏ CEO ဖြစ်သူ NAB မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတဲမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရ!
@plurabroadcast ၏ ray Kalo အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Live Show အတွက်ပါ!
#nabshow 2016 "width ကို =" 603 "အမြင့် =" 748 "srcset =" https://www.broadcastbeat.com/wp-content/uploads/2016/04/Travis-at-Pebble-Beach-Booth.jpg 603w, https: //www.broadcastbeat.com/wp-content/uploads/2016/04/Travis-at-Pebble-Beach-Booth-242x300.jpg 242w, https://www.broadcastbeat.com/wp-content/uploads/2016 /04/Travis-at-Pebble-Beach-Booth-403x500.jpg 403w "အရွယ်အစား =" (max-width ကို: 603px) 100vw, 603px "/>
Travis မှာအနည်းငယ်အပိုရိုက်ကူးဖမ်း Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ 2016 ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင် NAB ပြရန်
ရသည်မှာအဲရစ် "အနက်ရောင်အပေါက်များတွင်၏။ " ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သည်! @sennheiser
Jaimi ပတေရုသ Hajittofi ၏မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ
ပညာရှင် Hans Chia မှာဒေသဆိုင်ရာအရောင်း Manager ကို Clear ကို-Com ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြစရာ Jaimi တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနှင့်အတူ
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံး NAB ပြရန် LIVE! Program ကို - ထိုအသံလွှင့်အများအပြားနှင့်အတူလေယာဉ်အမှုထမ်း Beat
WE 2016 မှာ Awesome အချိန်ရှိခဲ့ NAB ပြရန်! အဆိုပါ Show မှာလူတိုင်းအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည် - ညာဘက်ကိုဆင်းဖို့ NAB နိုင်ငံတော်သမ္မတဂေါ်ဒွန်စမစ်ကနေ - အဆိုပါ Show မှာလှံတံကနေညာဘက်ကိုတစ်ဦးချင်းစီသည်တက်ရောက်သူဆင်း ... ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသောအရာတို့ကိုကြီးမြတ်စေလူတိုင်းအတွက် (နှင့်ငါလူကိုဆိုလိုတာ) ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် website တစ်ခုသွားရောက်ခဲ့ပြီးပင်နည်းနည်းလေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပေမည်သူကိုလူတစ်ဦး ... ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့် blogged-အတွက်အကောင်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းလွှမ်းခြုံများအတွက်ရိုက်နှက်ထုတ်လွှင့်ဖို့နေဖို့မှတ်မိပါ
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit က Ultra HD ဖိုရမ် 2016-04-21
ယခင်: Calabash '' Catch '' ချာလီနယူး Animated StarKist ကြော်ငြာများတွင်အဆိုပါငါး
နောက်တစ်ခု: KFX နည်းပညာ NAB 2016 မှာသုံးထုတ်ကုန်အသစ်တွေဖွင့်ဖို့ MYT အလုပ်လုပ်နှင့်အတူပူးပေါင်း